Makedonia: Hira Adaladala Manao Politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2017 5:43 GMT
Rehefa avy nitatitra lohahevitra momba ireo hira amin'ny dokambarotra mahatsikaiky ao Makedonia ny GVO, nipoitra tao amin'ny habaka Makedoniana ireo ohatra vitsivitsy maromaro. Ny tena voaresaka dia ny hira fanevan'ny Tanora Sosialista [MKD], sampan'ny tanora ao amin'ny Antoko Sosialista Makedonia.
Raha nidera ny hira fanevan'ny [MKD] izay anisan'ny malaza amin'ny «famoronana tsy mitsaha-mitombo eo amin'ireo antoko politika Makedoniana» sy ny fampiasana ny fampahalalam-baovao ho fomba mahazatra amin'ny fifandraisana amin'ny olom-pirenena ny vavahadin-tserasera Kirilica , somary manadino kosa ireo loharanom-baovao sasany maro tsy miankina. Ny 365 nampitaha ny [MKD] amin'ny antoko mpihira filazantsara sandoka, tao amin'ny On.net kosa nandefa ny tahadikan'ny lahatsary sy ny teny fampidirana [MKD]:
Oao, vatomamy mozika ara-politika izany! Ny horonantsarin'ny hira fanevan'ny tanora sosialista Makedonia, matsiro, matsiro! Ara-mozika, tahaka ny Band Aid izany (SPM ho an'i Afrika: Fantatr'izy ireo ve fa fotoana hisakafoanana atoandro izao?), ary mampihetsi-po fa ahitana ny sombin-kiran”i Mira Marković (“Ao ankavia ihany koa ny fo”) izany sy rima, fanantoloana, maha-olona, sosialista, mpiboridana ihany koa… Ary ny fandrafetana: raha vao voalaza ny teny hoe «mpanana vina (visionnaire)» . Hita tamin'izany i, Ljubisav Ivanov, miaraka amin'i Goce Delchev. Tiavo, tiavo
Raha toa ianao ka [namana/sakaiza] tsy misy kilema
Mitarika ny iray amin'ireo fianakaviana manankarena indrindra ao amin'ny firenena i Ivanov, ary nampiasa ny toerany ambony ara-politika taloha sy taorian'ny fahaleovantenan'i Makedonia izy mba hanome ireo orinasa mifandraika amin'ny ahiahin'ny Sileks hotantanin'ny tsy miankina, anisan'izany ny toeram-pitrandrahana, ny banky sy ny orinasan'ny fanamboarana, mifamatotra amin'ireo tantara ratsy marobe momba ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa. Manana Fahitalavitra Sitel, Klioba Baolina Kitra Sileks ihany koa ity fianakaviana ity ary saika mitantana ny tanànan'i Kratovo toy ny fanjakana kely.
Niresaka momba ilay lahatsoratra GVO ny lahatsoratra iray [MKD] tao amin'ny gazetiboky Makedoniana Globus ary namelabelatra amin'ny an-tsipiriany ny hiran'ny tanora sosialista. Nanazava ny fampiasàn'i Mira Markovic, vady navelan'ny filoha Serba Slobodan Milosevic ny teny filamatry ny mpanoratra ny lahatsoratra, Dzvezdan Georgievski, manasongadina ireo fitaomana isan-karazany ao amin'ny SPM sy ny fitondrana misy azy.